မိုးပန်းချီ: October 2011
သူ၊ ကျွန်မနှင့် စကားပြောသောဓါတ်ပုံများ (၂)
နောက်တစ်ခါလာပြန်ပါပြီ။ နံပါတ်မှာ (၂) နဲ့နှိပ်စက်ချင်လို့ နံပါတ် (၁) ကလေးနဲ့ စထားခဲ့တာလေးမှတ်မိမယ်ထင်ပါရဲ့။ အတော်ကလေးမေ့လောက်ရှိမှ နံပါတ်၂ ကိုတင်ရတာကလည်းအကြောင်းရှိပါတယ်။ မအားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အလည်လွန်နေလို့ဆိုရင် မှားနိုင်ဖွယ်ရာအလျဉ်းမရှိပါး) အလည်လွန်တာကလည်းအကြောင်းရှိပါတယ်။ သက်တမျှကြောင့်ဆိုပါတော့ရှင်။ သက်တမျှကို ခေါင်းတုံးရိတ်ပေးချင်တာလည်းပါ ပါတယ်။
အဲ..ခုထိတော့ ဇာတ်ရည်မလည်နိုင်သေးမယ်မထင်ပါဘူး။ အိမ်ကလူရဲ့ သဘောထားနဲ့တည့်တည့်ကြီးဆန့်ကျင်ပြီး သက်တမျှကိုခေါင်းတုံးရိတ်ပေးချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းကအစ အမေနဲ့ရွာကိုလွမ်းတဲ့ဓါတ်အခြေခံက အလယ်၊ ဖုတ်ပူမီးတိုက် လာ့စ်တ်မီးနစ် ကလေးမှာလေယာဉ်လက်မှတ်ဖြတ်လိုက်တာမှာ ဆုံးလို့ ရန်ကုန်ကို ကြယ်ဂျက်လေယာဉ်နဲ့ ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်…။ အခုခြင်္သေ့ကျွန်းကိုပြန်ရောက်နေပေမယ့်လည်း အကြီးမားဆုံးရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ သက်တမျှခေါင်းတုံးတုံးရေးကတော့ မအောင်မြင် မထမြောက်ခဲ့ပါဘူး..။ အကြောင်းအရင်းအကျယ်ကိုတော့ နောက်ရေးမယ့် ရန်ကုန်အကြောင်းပို့စ်မှာ ထည့်ရေးဖို့စီစဉ်အကွက်ချထားကြောင်းပါရှင့်း)) ရန်ကုန်ကပါလာတဲ့ မုန့်တွေ မပုပ်မသိုးခင်ပို့စ်တင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ်…း)
စကားချီးတွေများလွန်းပြီး ရေးမယ့်အကြောင်းအရာ လမ်းချော်ပြန်ပါပြီးD လမ်းကြောင်းပြန်တည့်ပါမယ်။
ဓါတ်ပုံဝါသနာပါတာနဲ့ပတ်သက်လို့ နိဒါန်းပြန်ပျိုးရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မခပ်ငယ်ငယ် မူလတန်းလောက်တုန်းက (လေးတန်းလောက်တုန်းကပါ) စကြပါစို့ရဲ့။ ကျွန်မရဲ့ အတန်းပိုင်ဆရာမနဲ့ ကျွန်မတို့ ကလေးတွေ excursion ထွက်ကြတဲ့အခါ ကလေးတိုင်းလိုလိုကဓါတ်ပုံအရိုက်ခံချင်ကြပေမယ့် လူတတ်ကြီးသိပ်လုပ်ချင်တဲ့ ကျွန်မကတော့ ဆရာမကိုင်ထားတဲ့ ကင်မရာကိုတောင်းပြီး အုပ်စုလိုက်ပုံကို ကျွန်မကိုယ်တိုင်ရိုက်ပေးမယ်ဆိုလို့ ဆိုပါသတဲ့း) ငယ်ငယ်ကတည်းက အကဲပိုပုံများနော်း)) လူဇိုးးးပဲ…း)) စပ်စပ်စုစု ကင်မရာဆိုတာဟာ ဒါကြီးလား လုပ်ကြည့်ချင်တာလည်းပါမှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါပဲ။ စွန့်စားခန်းက အဲဒိမှာစတွေ့ပါတယ်။ ကိုယ်သိချင်တာ၊ တတ်ချင်တာကို သိပ်တော့လည်း တစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ်ခဲ့တာ၊ ဝါသနာပါခဲ့တာတော့မဟုတ်ပေမယ့် ဇာတ်လမ်းရဲ့ အစကအဲဒီမှာစတယ်လို့ ဆိုရမလိုပါ။ အို…ရှုပ်ပါတယ်..ဆိုလိုက်ပါပြီ.း))
ရန်ကုန်မပြန်ခင်လေးက လက်ဆော့ထားတာလေးတွေကို အားပေးပါဦးရှင်..။ ဓါတ်ပုံတွေက စကားပြော၊ မပြောဆိုတာလေးလည်း ကြည့်ပေးသွားပါဦးနော်…။ ကြည့်မိလို့ ကြိုက်သွားရင်ကွယ် တာဝန်မယူးD ပုံတွေက စကားမပြောဘူးဆိုရင်တော့လည်း မပြောဘူးပေါ့ရှင်..ကျွန်မရဲ့ လျှပ်တစ်ပြက် ညံ့ချက်ပါပဲး)) တစ်ခုလောက်တော့ကြိုပြီးတောင်းပန်ပါရစေ…အောက်က ပန်းပုံတွေရိုက်တုန်းက macro နဲ့ရိုက်ထားတာမဟုတ်ပဲ macro filter နဲ့သာရိုက်ထားတာဖြစ်ကြောင်းပါ…။ macro lens ကဈေးကြီးတယ်ရှင့်..မဝယ်နိုင်သေးဘူးတော်ရေ့…းD
ဒီပုံက ခါတော်မီလေးတင်ချင်ပေမယ့် ခါတော်ကိုမမီလိုက်ပါဘူး..။ မီးတွေထိန်ထိန်လင်းနေပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ပြည်ကိုယ်ရွာနဲ့မှားစရာ လားလားမှမရှိတဲ့နေရာ..။
ရေးသူ -- ပန်းချီ at 1:16 AM 15 comments
အားလုံး မျှော်လင့်နေကြတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာမည်ဟူသော သတင်းကြောင့် အင်းစိန်ထောင်ရှေ့၌ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားမိသားစုဝင်များ၊ သတင်းမီဒီယာများ စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်..။
နေ့လည် ၁နာရီမှာ အစိုးရ MRTV သတင်းဋ္ဌာနမှ မနက်ဖြန် သီးတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့မှာ အကျဉ်းသား ၆၃၅၉ ဦးအား ၁၂ အောက်တိုဘာမှ စပြီး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်ပြီဟု ကြားဖြတ်သတင်းကြေငြာလိုက်ပါတယ်..။
*** MRTV4 ကသတင်းကို မိတ်ဆွေတစ်ယောက် (ကိုမောင်မောင်) စာရိုက်ပြီးယူထားတာလေး မျှဝေတာပါ..။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများရဲ့ မိသားစုဝင်များနဲ့ ထပ်တူဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်..။ သူတို့ဘယ်လောက်များပျော်လိုက်ကြမလဲနော်..း) ***
p.s အားလုံးပဲ မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ခညောင်းသော သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ဖြစ်ပါစေ..။
ရေးသူ -- ပန်းချီ at 4:40 PM 16 comments
I'm gonna say hello to Yangon in person very soon.. Pls take care of yourself and no worries, I'll surely take extra care of myself and 'thetta hmya' as well.
Hmmm, no body will miss me thou :))
Anyway, I'll be back soon to see you all again! Okie?
ရေးသူ -- ပန်းချီ at 8:14 AM7comments